आफैंले जन्माएका सन्तानप्रति पनि कोहीकोही अत्यन्तै निर्दयी बन्न पुग्छन किन ? कारण यस्तो « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
आफैंले जन्माएका सन्तानप्रति पनि कोहीकोही अत्यन्तै निर्दयी बन्न पुग्छन किन ? कारण यस्तो
कोही मान्छे आफूलाई कुनै हानी-नोक्सानी नगर्नेप्रति किन अति धेरै क्रुर हुन्छन्? अझ कहिलेकाहीँ त आफैंले जन्माएका सन्तानप्रति पनि कोहीकोही अत्यन्तै निर्दयी किन किन हुन्छन्?
मान्छेमा यस्तो नराम्रो बानी कसरी विकास हुन्छ होला ? यसले ती मानिसलाई के फाइदा पुर्‍याएजस्तो लाग्छ होला ?
सन् १६५८ मै फ्रान्सेली दार्शनिक ब्लेज पास्कलले एउटा निष्कर्ष निकालेका थिए, मान्छे भनेका यो संसारकै महान र संसारकै घिनलाग्दो अस्तित्व हो।
यस्तो हो भने आखिर किन कोही मान्छे निर्दोष कसैलाई दुःख-पीडा दिन्छन्रु
निर्दोषमाथि दुःखको कहर बर्साउन खोज्नुको अर्को एउटा कारण पनि छ, आफूलाई कुनै खतरा महशुस गर्नु।
अलि बुझ्न गाह्रो मानवीय चरित्रलाई जान्न यो कुराले मद्दत गर्छ, कसैबाट पैसा लिएर अरूलाई हानी पुर्‍याउने वा नोक्सान गर्ने। जस्तो, सिनेमाहरूमा कुनै खलपात्रले पैसा दिएकै कारण केही गुन्डाले कोही निर्दोष मानिसलाई कुटपिट गरेको देख्छौं।
के यो २१ औं शताब्दीमा पनि हामी दयालु देखिनकै लागि आफूभित्र क्रुरता जीवितै राखिरहौंला ?
अर्कालाई गिज्याउने ९ट्रोल० र स्कुलमा सोझासाझालाई हेप्ने ९बुली० खालका प्रवृत्ति त दिनैजसो भेटिन्छन्। त्यस्ताको बदमासी इन्टरनेटबाट खेलिने खेलको चर्चित पात्र ुग्रिफरु को जस्तै हुन्छ। ग्रिफर खेलहरू भताङभुतुङ पारिदिने शैतानी पात्र हो।
उनीहरूले यति सजिलै यस्ता काम कसरी गर्छन् तरु यसको कारण हो, उनीहरूलाई कुनै पनि कुरा नराम्रो लाग्दैन। पछुतो हुँदैन। वा डर पनि लाग्दैन। यी भावना भए पनि अति नै कम हुन्छ। अरूले देखेर वा थाहा पाएर के भन्लान् भन्ने भय हुन्छ, तर त्यसले उनीहरूको व्यवहारमा केही फरक पार्दैन।
धन्न, धेरैजसो मानिसमा मनोरोगको लक्षण हुँदैन। ५ प्रतिशत मानिसमा यस्तो संकेत देखिन सक्छ। तर जेल जीवन बिताइरहेकामध्ये ८ प्रतिशत पुरुषमा र २ प्रतिशत महिलामा मनोरोगको लक्षण देखिन्छ।
तर सबै मनोरोगी खतरनाक हुँदैनन्। असामाजिक चरित्र भएका मनोरोगीले लागुऔषध वा खतरनाक गतिविधिबाट आफ्नो तुष्टि मेटिरहेका हुन्छन्। सामाजिक चरित्र बोकेका मनोरोगीहरू भने नयाँनयाँ विचारहरूलाई बिना धक(डर अघि बढाएर त्यो तुष्टि मेट्छन्।
केही मानिसहरू किन परपीडक चरित्रका हुन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन। कसै(कसैले अनुमान लगाएअनुसार शिकारी युगमा जनावरमाथि हिंसा अपनाउँदाका क्रममा यो प्रवृत्ति मानवले ग्रहण गरेका थिए। अर्काथरि चाहिँ मानिसलाई शक्ति आर्जन गर्न यस्तो प्रवृत्तिले सघाउ पुर्‍याएको अनुमान लगाउँछन्।
परपीडक र मनोरोग अन्य लक्षणसँग पनि जोडिन सक्छ, जस्तो अहंकारी हुनु वा मेकियाभेली ९आफ्नो कुरो साबित गर्न अर्कालाई जसरी पनि गलत देखाउनु० हुनु। मानिसमा देखिने यस्तो लक्षणलाई छोटकरीमा ‘डी फ्याक्टर’ पनि भनिन्छ।
यसमा पनि वंशाणुगत हिसाबले आउने सामान्यदेखि असाध्यै ठूलो प्रभावका लक्षण हुन्छन्। केह्यी मानिसहरू जन्मजातै यस्ता हुन्छन्। कसैमा भने उच्च मात्रामा ‘डी फ्याक्टर’ भएका आमाबाबुले सन्तानसँग अपमानजनक व्यवहार गर्दागर्दै उनीहरूलाई पनि यो गुण सारिदिन्छन्। त्यसैगरी यस्तो बानी(व्यहोरा भएका मानिस झेल्दाझेल्दै सामान्य मानिस पनि परपीडक व्यवहार गर्ने भइदिन सक्छ।
कहिलेकाहीँ मानिसले आफ्ना लागि राम्रै गरिरहेकालाई पनि सास्ती दिन्छन्। यस किसिमको प्रवृत्तिलाई राम्रा मानिसले गर्ने अपमान ९डु गुडर डेरोगेसन० भनिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति संसारभर नै देखिन्छ।
कुनै कुनै मानिस आफूले आदर्श ठानेको व्यक्तिजस्तै बन्ने बाटोमा लाग्दालाग्दै पत्तै नपाई स्वयंमाथि आफैंले क्रुरता गरिरहेको पनि हुनसक्छ। नित्सेलाई क्रुरता भोग्नु भनेको आफूमा साहस, धैर्यता र रचनात्मकता बढाउनु हो भन्ने लाग्छ। के हामीले पुण्य कमाउन अरू र आफैलाई पनि धेरै सास्ती दिने मार्गमा लैजानु उचित होरु
क्रुरताको माध्यमबाट शिक्षा दिनु भनेको त्यसले केवल शक्तिको दुरुपयोग र स्वार्थी परपीडन निम्त्याउनु मात्र हो। मानिसको जीवन क्रुर हुनसक्छ, कसै(कसैको सत्य निःसन्देह क्रुर भइदिन सक्छ, तर पनि हामी आफू क्रुर नहुने बाटो रोज्न स्वतन्त्र छौं।
सिमोन म्याकार्थी जोन्सले लेखेको स्टोरीको नेपाली अनुवाद